Ed Woodward Oo La Siiyay Liiska Shan Tababare Ee La Doonayo In Ay Badal U Noqdaan Solskjaer Iyo Tababare Isagii Caydhin Ka Cabsanayo Oo Liiskan Ku Jira. - (HILLAAC.NET) THE BEST INDEPENDENT RELIABLE SOMALI NEWS
Ed Woodward Oo La Siiyay Liiska Shan Tababare Ee La Doonayo In Ay Badal U Noqdaan Solskjaer Iyo Tababare Isagii Caydhin Ka Cabsanayo Oo Liiskan Ku Jira.
October 8, 2019 at 17:02 Ed Woodward Oo La Siiyay Liiska Shan Tababare Ee La Doonayo In Ay Badal U Noqdaan Solskjaer Iyo Tababare Isagii Caydhin Ka Cabsanayo Oo Liiskan Ku Jira.2019-10-08T17:02:44+01:00 CAYAARAHA
Shaqada tababaranimo ee Manchester United ayaa markale noqotay mid miiska saaran kadib markii uu Ole Gunnar Solskjaer si xun ugu fashilmay xili ciyaareedka cusub ee Premier League.
Gudoomiye ku xigeenka Man United ee Ed Woodward ayaa la siiyay liiska tababarayaasha ay tahay in uu sii calaamadsado si ay badal ugu noqdaan Ole Gunnar Solskjaer oo ay suurtogal tahay in shaqada laga caydhin karo inta aanu sanadkani dhamaan.
Iyada oo lagu jiro bishii saddexaad oo kaliya ee xili ciyaareedka Premeir League, waxay Manchester United is arkaysaa iyaga oo 15 dhicbood ka hooseeya Liverpool oo hogaaminaysa Premier league waxayna taasi halis wayn galinaysaa Ole Gunnar Solskjaer.
Tababaraha kooxda Tottenham ku dhibtoonaya ee Mauricio Pochettino oo isaga laftiisa la hadal hayo in uu booskiisa lumin karo ayaa ka mid ah dhawrka magaca ee Ed Woodward lagula taliyay in uu badalka Solskjaer ka dhigto.
Pochettino oo waqti dheer lala xidhiidhinayay Man United ayaa xaalad xun kaga jira Tottenham kadib guuldarooyinkii fadeexada ahaa ee Spurs ka soo gaadhay Bayern Munich iyo Brighton.
Laakiin waxa uu cadaadiska haysta ee Tottenham kaga bixi karaa in maamulka Man United ay ka dhigan karaan badalka Solskjaer.
Laakiin waxaa liiska musharixiinta tababarayaasha Man United si wayn loogu daray macalinka kooxda Bournemouth ee Eddie Howe kaas oo shaqo adag soo qabtay sanadihii la soo dhaafay.
Magaca saddexaad ee liiska tababarayaasha Ed Woodward loo soo bandhigay ayaa ah tababaraha kooxda Wolves ee Nuno Espirito Santo kaas oo leh awood tababare oo layaableh wuxuuna Wolves ka dhigay mid ay ka walwalaan kooxaha waa wayn ee Yurub.
Waxa kale oo uu Nuno Espirito Santo awooday in kooxda Wolves oo uu heerka labaad ka soo saaray in uu ku hogaamiyay ka ciyaarista tartanka kooxaha Yurub ee Europa League oo ay Man United lafteedu ku jirto.
Nuno Espirito Santo ayaan haysan lacagta badan ee uu Solskjaer helay iyo waliba magca wayn ee kooxda uu hogaaminayo ee Man United, laakiin isaga oo Wolves heerka labaad ka soo saaray ayuu Europa League u soo saaray isla marakaana ay helayaan natiijooyin layaableh.
Sidaa daraadeed, waxa uu Nuno Espirito Santo ka mid yahay magacyada lagu soo qaaday in ay badalka u noqdaan Soslkajer.
Waxa kale oo liiskan ku jira ee badalka Soslkajer noqon kara macalinka kooxda Paris Saint-Germain ee Thomas Tuchel iyo Lucien Favre oo shaqo fiican ka qabanaya kooxda Borussia Dortmund.
Laakiin shantan magaca ee Ed Woodward loo soo jeediyay in uu ka dhex raadsado badalka Solskjaer waxaa ka maqan magacyo kale oo ay warbaahintu hadal hayso in ay Man United xidhiidh la samayn karto.
« Guddiga Doorashooyinka Qaranka oo sheegay in ay dhib ku qabaan Madaxtooyada
Book: Trump raged against refugees from Somalia in private meeting »